Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ယုံကြည်မှုကွန်ယက် မှ ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ယက်ဆီသို့
Wai Yan De Mo's Facebook
၉.၇.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ နေ့လည် (၂းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ “လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်း ပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ယက်”မှ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်များအတွက် လာရောက်လှူ ဒါန်းမှုကို ပြုလုပ်ရာတွင် “လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်း ပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ယက်” ဖြစ်ပေါ်လာပုံအား ဦးအောင်သန်းမှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ဦးရဲလွင်မှ ဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူငွေ လှူဒါန်းရခြင်း အကြောင်း ပြောကြားရာတွင် “မိမိတို့ တတ်ကျွမ်းသော ဂီတသံစဉ်များဖြင့် ရှာဖွေထားသော အလှူငွေ များအား ဦးကျော်သူနှင့် တစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်သည်ကတစ်ကြောင်း၊ ဦးကျော်သူတို့၏ လုပ်ဆောင်ပေးဆပ်မှု များကို ယုံကြည်စိတ်ချ၍၄င်း၊ ဦးကျော်သူတို့ထံ ဤအလှူငွေများအား လှူဒါန်းပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း” ပြောကြားခဲ့ကာ အလှူငွေကျပ် ၁၈၅၆ဝဝဝဝိ/- (တစ်ရာရှစ်ဆယ့်ငါးသိန်းခြောက် သောင်း)ကျပ်၊ US$ - 118 နှင့် S$ - 50 တို့အား လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားအား ကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်းနောက် နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူမှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောရာတွင် “လောကကြီးတွင် စည်း ဆိုတာ အရေးကြီးကြောင်း၊ မည်သည့်နယ်ပယ်တွင်မဆို စည်းဖောက်၍ မရ ကြောင်း၊ တိုင်းပြည်၊ နိုင်ငံ၏စည်းကို ဖောက်ဖျက်ခံရခြင်းကြောင့် ပြည်သူလူထုများ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့သော ရခိုင်ပြည်သူလူထုတို့အတွက် ယခုလို လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်း ပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ယက်”မှ ကိုယ်ကျိုးစွန့် ရှာဖွေခဲ့သော အလှူငွေများအား မိမိတို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အနေဖြင့် စည်းစနစ်ကျစွာဖြင့် လက်ဆင့်ကမ်း ရခိုင်ဒေသရှိ ပြည်သူဒုက္ခသည်များထံသို့ အရောက်ပို့ပေးမည်ဟု ဂတိပေးကြောင်း” ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်း ပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ယက်မှ ဦးရဲလွင်၊ ကိုသားထွေး၊ ကောင်းပြည့်၊ တိုးလွင် (ဥတ္တရအလင်း)၊ E ချို၊ ကိုထွဋ်၊ ကိုတင်အုန်း၊ ညီညီလွင်၊ ဖိုးစံ တို့မှ တီးခတ်ဖျော်ဖြေ သီဆိုခဲ့ပြီး ကဗျာဆရာ ကိုစောဝေမှ တီးဝိုင်းသံစဉ်နှင့်အတူ “မိတ္ထီလာ” အမည်ရှိ ကဗျာတစ်ပုဒ်အား ရွတ်ဖတ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကာ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်မှ လွတ်လပ် ငြိမ်းချမ်း ပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ယက် ဖျော်ဖြေမှုအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှင့် မိမိတို့အနေဖြင့် နေ့တဓူဝ သောကအပူများဖြင့်သာ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ စိတ်၏ထွက်ပေါက်ဖြစ်သော ဂီတ သံစဉ်များကို မထင်မှတ်ပဲ နားစဉ်ခဲ့ရ၍ လူမှုရေးခွန်အားများ တိုးတက်လာကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ကြွရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များ၊ မီဒီယာများနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အသင်းသား/ သူများအား ကော်ဖီ၊ မုန့်များဖြင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံခဲ့ကာ ပြည်တွင်း/ပ မီဒီယာများတို့မှ မေးမြန်းချက်များကို ဖြေကြားကြပြီးသည့်နောက် အခမ်းအနားအား ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 06:45
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ယုံကြည်မှုကွန်ယက် မှ ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ယက်ဆီသို့ . All Rights Reserved